KAREN NATIONAL LEAGUE (JAPAN): 02/02/2014
ဖာပွန်ခရိုင် ဒေဘူးနို တွင်ကျင်းပသော ၆၅ ကြိမ်မြောက် ကရင့်တော်လှန်ရေးနေ့ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းများ
ဒေဘူးနိုမှာ ကျင်းပတဲ့ ကရင့်တော်လှန်ရေးနေ့ ကို သတင်းမီဒီယာဌာနကြီးတွေကမရောက်ခဲ့ပါဘူး.. သို့ ဖြစ်ပါ၍ ဓါတ်ပုံများကို စုစည်းပြီး တင်ဆက်ပေးထားပါသည်။
Go... Thu Mu Doh and your special force K.P.Th... Right Now!!You are the only group that we trust 100% for the purpose of the Karen people. We love you all....
With you, We will go every WAR and any kind of WAR.....
ဓါတ်ပုံ - နော်ကညောဖေါ ဖေ့ဘွတ်
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 10:22 AM No comments:
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 10:19 AM No comments:
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 10:06 AM No comments:
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(ကေအဲန်ယူ)၏ တပ်မဟာ(၇)တွင် စစ်ဆင်ရေးမှူးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် အသက် (၇၀)နှစ်အရွယ် ဗိုလ်မှူးကြီးစောဂရင်းကိုသည် ဇန်န၀ါရီ ၃၁ရက်နေ့က လူကြီးရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန်သွားကြောင်းသိရသည့်အတွက်. KNL-Japan အဖွဲ့များမှ ကျန်ရစ်သောမိသားစုများနှင့်အတူထပ်တူထပ်မျှဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါသည်
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 9:56 AM No comments:
စည်းလုံးညီညွှတ်ရေး ပြန်လုပ်ဆောင်ရန်လိုဟု တော်လှန်ရေးနေ့၌ ကေအဲန်ယူ ပြောဆို
ဇန်န၀ါရီ ၃၁ရက်၊ ၂၀၁၄ခုနှစ်။ ကေအိုင်စီ
ယနေ့ကျရောက်သော ၆၅နှစ်မြောက် ကရင်အမျိုးသား တော်လှန်ရေးနေ့ကို ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(ကေအဲန်ယူ) တပ်မ ဟာ(၇)ဌာနချုပ်၌ ကျင်းပခဲ့သည့် အခမ်းအနားတွင် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ပဒိုစောကွယ်ထူးဝင်းက ကရင်အမျိုးသားများ စည်းလုံးညီညွှတ်ရေးအတွက် ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောဆိုလိုက်သည်။
“စည်းလုံးညီညွှတ်မှုဟာ ကျနော်တို့ ပြန်ပြီးတော့ လုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်။ ကျနော်တို့ ရည်ရွယ်၊ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်လာခဲ့တာပဲ။ ဘီဂျီအက်ဖ်ဟာလည်း ပြောရမယ်ဆို တချိန်တုန်းက ကျနော်တို့ ကေအဲန်ယူရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါ။ ဒီကေဘီအေလည်း အဲလို ပါပဲ။ ဒါကြောင့်မို့ ကျနော်တို့ဟာ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေ အကုန်လုံး ပြန်ပြီးတော့ နားလည်မှုရှိရှိနဲ့ ကျနော်တို့ အမျိုးသား အကျိုးနဲ့ နိုင်ငံအတွက်တော့ လုပ်ဆောင်သွားရမှာပဲ”ဟု ပဒိုစောကွယ်ထူးဝင်းက ပြောသည်။
အဆိုပါ အခမ်းအနားကို မနက် ၇နာရီတွင် စစ်ရေးချီတက်ခြင်း အစီအစဉ်ဖြင့် စတင်ခဲ့ကြပြီး ကေအဲန်ယူ ဥက္ကဌနှင့် အရပ်ဖက်၊ တပ်ဖက်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များ၊ နယ်ခြားစောင့်တပ်မှ တပ်မှူးတပ်သားအချို့ အပါအ၀င် လူထုပရိဿတ် သုံးထောင်နီးပါး လာရောက်ဆင်နွဲခဲ့ကြပြီး ကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး၊ ကရင်လူငယ်အစည်းအရုံးတို့ အပြင် ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ၊ ရခိုင်အမျိုးသားကောင်စီတို့မှ သ၀ဏ်လွှာများ ပေးပို့ခဲ့ကြသည်။
ထိုနေ့ကို ဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့် နာမည်ကြီးကရင်အဆိုတော် ကဗျာဘွဲ့မှူးကလည်း တော်လှန်ရေးနေ့ စတိတ်ရှိုးပွဲ၌ ဇန်န၀ါရီ ၃၀ ရက်နေ့ညက လာရောက်သီဆိုပေးခဲ့သကဲ့သို့ နယ်ခြားစောင့်တပ်(၁၀၁၅)တပ်ရင်း၏ ဇာတ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကလည်း ဇန်န၀ါရီလ ၂၉ ရက်မှစ၍ သုံးညတိုင် လာရောက်ကပြခဲ့သည့်အပြင် တော်လှန်ရေးနေ့ အခမ်းအနားအပြီး၌ ဒုံးအကများဖြင့် ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။
BGF (၁၀၁၅)တပ်ရင်းမှူး ဗိုလ်မှူးစောဝင်းနိုင်စိန်က “ကိုယ့်လူထုအတွက်၊ ကိုယ့်လူမျိုးအတွက် သင့်မြတ်ညီညွှတ်ဖို့ကို ကျနော်တို့ လည်း ခံယူထားပါတယ်။ ကျနော်တို့ မိခင်အဖွဲ့အစည်းက ကေအဲန်ယူပဲ။ အရင်က ကျနော်တို့တွေဟာ သွေးခွဲခံရတယ်။ ကရင် အချင်းချင်း ဖြစ်ပေမဲ့ မျက်နှာမကြည့်နိုင်ကြဘူး။ အခု အတူတကွ ရှိနေကြတယ်လေ။ တော်လှန်ရေးနေ့ပွဲကို လာရတာ စိတ်ရွှင် လန်းတယ်။ တချိန်မှာ ကျနော်တို့ကရင်တွေအားလုံး ညီညွှတ်ဖို့ မျှတဖို့ကို ကျနော် ရည်စူးပါတယ်”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
အခမ်းအနား အစီအစဉ်နောက်ဆုံးတွင် ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်(KNLA) ၏ စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစော ဂျော်နီ အပါအ၀င် တက်ရောက်လာသူ ကရင်လက်နက်ကိုင်ခေါင်းဆောင်များက ကရင်အမျိုးသားအလံကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း အလေးပြုခဲ့ကြသည်။
အလားတူ ကေအဲန်ယူ ဖာပွန်ခရိုင်ရှိ ဒေးပူနိုနယ်မြေ၌လည်း တော်လှန်ရေးနေ့ အခမ်းအနားကို ကျင်းပရာ အနီးတ၀ိုက်ရှိ ကရင် ကျေးရွာများမှ ကရင်လူထု ၅၀၀၀နီးပါးတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ကေအဲန်ယူ ဒုဥက္ကဌ ပဒိုနော်စီဖိုးရာစိန်နှင့် KNLA ဒုတိယ စစ်ဦးစီး ချုပ် ဗိုလ်ချုပ်စောဘောကျော်ဟဲတို့ ပါဝင်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ကေအဲန်ယူ ဒုဥက္ကဌ ပဒိုနော်စီဖိုးရာစိန်က “ကရင့်တော်လှန်ရေးရာ ၆၅နှစ်ကြာသွားပြီး ဒါပေမယ့် ကျမတို့ လိုလားတဲ့ ပန်းတိုင်ကို မရောက်သေးဘူး။ ၁၉၄၉ရဲ့ စိတ်ကို မမေ့ကြပါနဲ့။ ကျမတို့တော်လှန်ရေးဟာ မပြီးဆုံးသေးဘူး။ လုပ်ဆောင်တိုက်ပွဲဝင်ဆဲကာလ ဖြစ်တယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျမတို့တွေ အားလုံး ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားရမယ်”ဟု ဖာပွန်ခရိုင် တော်လှန်ရေးနေ့ အခမ်း အနားတွင် မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့သည်။
တပ်မဟာ(၇)တွင် ကျင်းပသည့် ၆၅နှစ်မြောက် ကရင့်အမျိုးသားတော်လှန်ရေးနေ့၏ စစ်ရေးပြ အစီအစဉ်၌ ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြု ကရင့်တပ်မတော်(ဒီကေဘီအေ) တပ်ဖွဲ့ဝင်များလည်း ပူးတွဲပါဝင်မည်ဟု သိရှိခဲ့ရသော်လည်း လေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ချိန် မလောက်ငှမှု ကြောင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိကြောင်း ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီက ပြောဆိုသည်။ သို့သော် ခွဲထွက် ကရင်လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များအနေဖြင့် မိမိတို့၏ ယူနီဖောင်း၊ လက်နက်အပြည့်အစုံဖြင့် တက်ရောက်ခွင့်ရှိကြောင်း သိရသည်။
၂၀၁၃ ပဒိုမန်းရှာလူငယ်ခေါင်းဆောင်ဆု နော်ကညောဖောနီမရိုအား ရွေးချယ်ချီးမြှင့်
ဖေဖော်ဝါရီ ၁ရက်၊ ၂၀၁၄ခုနှစ်။ ကေအိုင်စီ
ဖန်းဖောင်ဒေးရှင်းက ပေးအပ်သော ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ ပဒိုမန်းရှာလူငယ်ခေါင်းဆောင်ဆုကို ကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး (KWO)၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး နော်ကညောဖောနီမရို (Naw K’nyaw Paw Nimrod) အား ဇန်န၀ါရီလ ၃၁ရက်နေ့က ချီးမြှင့်လိုက် သည်။
အဆိုပါဆုကို ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(ကေအဲန်ယူ)၏ ဖာပွန်ခရိုင်ဒေသ ဒေးပူနိုကျေးရွာ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော ၆၅နှစ် မြောက် ကရင့်တော်လှန်ရေးနေ့ ညနေပိုင်းတွင် ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနားပြုလုပ်ကာ ဖန်းဖောင်ဒေးရှင်း တည်ထောင်သူထဲတွင် ပါဝင်သည့် စောစေးစေးဖန်းက သွားရောက်ပေးအပ် ချီးမြှင့်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
“နော်ကညောဖောဟာ ဒုက္ခသည်စခန်းကနေ ကြီးပြင်းလာပြီး ခက်ခက်ခဲခဲ ပညာသင်ကြားခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ ကြိုးစားမှု တွေကြောင့် တဆင့်ပြီးတဆင့် တိုးတက်လာတယ်။ ကရင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမှာ အလုပ်လုပ်ပြီး ဦးဆောင်ဦးရွက်လည်း ပြုနိုင်တ ယ်။ ဒီအတွက်ကြောင့် သူ့ကို ဆုပေးဖို့ ရွေးချယ်လိုက်တာပဲ ဖြစ်တယ်”ဟု စောစေးစေးဖန်းက အခမ်းအနားတွင် ပြောကြားခဲ့ သည်။
နော်ကညောဖောသည် ကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး(KWO) တွင် (၁၉၉၉)ခုနှစ်ကတည်းက စတင် ပါဝင်ခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလက ပြုလုပ်ခဲ့သော ၆ကြိမ်မြောက် KWO ညီလာခံ၌ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် အများမဲဆန္ဒအရ ရွေးကောက်ခြင်းခံခဲ့ရသူ ဖြစ်သည်။
သူမသည် မိမိအဖွဲ့အစည်းအတွက် ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေး၊ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သင်တန်းများကိုလည်း အဖွဲ့ ၀င်အမျိုးသမီးများနှင့် ကျောင်းသူလေးများအား ပို့ချပေးခဲ့ပြီး နိုင်ငံတကာသို့ သွားရောက်၍လည်း ကရင်လူမျိုးများ၏ အဖိနှိပ်ခံရ မှုများ၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရမှုများ အပါအ၀င် ပဋိပက္ခကြားတွင် ရပ်တည်နေရသည့် ကရင်အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေး သူငယ်များ၏ အခြေအနေများကို စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုများ ဆောင်ရွက်ခဲ့သူလည်း ဖြစ်သည်။
ဆုရရှိသူ နော်ကညောဖောနီမရိုက “တီးပဒိုမန်းရှာကို ကျမ အရမ်းလေးစားရတယ်။ လူငယ်တွေကို အရမ်းအားပေးတဲ့ ခေါင်း ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ အဲဒီအတွက် ဒီဆုရတာ ၀မ်းသာတယ်။ ရမယ်လို့ မမျှော်လင့်ဘူး။ ဒီဆုရတာ ကျမ တဦးတ ယောက်အတွက်မဟုတ်ဘဲ ကျမတို့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုကြောင့် ရတာဖြစ်တယ်။ ဒီဆုဟာ လူငယ်တွေအ တွက် စံပြဆုတစ်ခုဖြစ်တယ်”ဟု ပြောသည်။
ပဒိုမန်းရှာလူငယ်ခေါင်းဆောင်ဆုကို ၂၀၀၈ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ရက်နေ့တွင် တည်ထောင်ခဲ့သော ဖန်းဖောင်ဒေးရှင်းက ကရင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွင် နိုင်ငံရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှုလုပ်ငန်းများတွင် ပေးဆပ်တာဝန်ယူသူ အသက် ၃၅နှစ်အောက် ကရင်လူငယ်မောင်မယ်များအား နှစ်စဉ် ချီးမြှင့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်တွင် ဆုရရှိသူမှာ ဆဌမမြောက်ဖြစ်ပြီး ဆုကြေးငွေမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ နှစ်ထောင် ဖြစ်သည်။
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 9:46 AM No comments:
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 9:45 AM No comments: